सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	4 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
कुनै देशमा चिनीजन्य गुलियो पदार्थ हालेर पिउने चलन छ भने कतै केही पनि नहाली सादा रुपमै पिइन्छ । चीनियाहरुले गुलियो पार्ने पदार्थ, मसला, चकलेट तथा जडिबुटी हालेर चिया पकाउछन् । भारत, नेपाललगायतका देशमा चिनी राखिन्छ । केहीले भने अदुवा, कागती, तुल्सी राखेर चिया पिउछन् ।
← जण्डिस र यसको उपचार
आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्त भनेको के हो ? →
4 thoughts on “किन कालो चिया नै खाने ?”
Pingback:चिया र यसका प्रकारहरु